Home Wararka Mustaf Cagjar Muxuu Faragelin u Yaqaanaa?
Mustag Cagjar oo wareysi siiyey Idaacadda VOA ayaa u sheegay inaysan jirin Itoobiya faragelin ay xelligaan ku hayso Somaliya. Mustaf oo runtii ah shakhsi la hubo qeybta ka yahay faragelinaha faraha badan ee Itoobiya ayaa maanta ku doodaya Itoobiya ma fargeliso Somaliya. Dhinac waa ka runtiis waa la oran karaa waayo Faragelin waa wax yar oo mar mar la sameeyo laakiin tan Itoobiya ay hadda Somaliya ku hayso waa la wareegid iyo iska maamulasho dhamaan dalka oo dhan.
Aynu qodod u dul istaagno waxyaabaha ay Itoobiya ka waddo Somaliya ilaa iyo intii uu yimid Abiy Axmed:
In Qeybaha jooga Beesha Marreexaan ee gobolka Gedo dayuurad lagu qaaday oo la geeyo Nasareed ee loo soo sheego si Khasab ah ay Xamar ku xernaadaan ugana amar qaataan si loo kala jebiyo Maamulka DG Jubaland iyadoo halkaas lagula kulan siiyey ninka ay tooska uga amar qaadan doonaan oo ah Cabdullaahi Kullanne ‘Jiis Mareexaan” Faragelin maaha miyaa?
In Dhallinyaro Somali ah oo Erateriya Tababar loo geeyey lagu xasuuqay dagaalkii Tigray lagula jiray Fargelin maaha miyaa, iyadoo ciidankaas aan lagala tashan golayaasha Somaliya
In Shariif Xasan uusan booqan Karin gurigiisii Baydhabo Mukhtaar Roobowna uu xabsi ugu jiro dowladda Itoobiya ciidanka Itoobiyana ay sidey ka yeelaan dadka degaanka ilaa maanta Faragelin maaha miyaa?
In LaftaGareen si kursiga loo saaro 15 qof ay ku xasuuqaan Baydhabo dhexdeeda ciidanka Itoobiya Faragelin maaha miyaa?
Inay Itoobiya dayuurado u adeegsato inay soo qabsato Axmed Madoobe Faragelin maaha miyaa?
Inay dhowr jeer taariikhda gayiga ay Itoobiya iyo Kenya isku qabsadaan Xuduudaha dalkeenna Faragelin maaha miyaa?
In Cabdiarshiid Jenan Xamar lagu soo xero welina uu yahay shakhsi la doondoonayo oo aan si xor ah dhulkiisa u joogi Karin kadib markii uu ka dhiidhiiyey xasuuqa Itoobiya Faragelin maaha miyaa?
Waxaa intaas oo dhan kaaga daran ihaanada loo geystay MW Farmajo Markii loo garraariyey go’a guduudan, kaas oo uu Afawerki iska diiday iyo iyadoo markii uu Abiy wax ka rabo oo sidii cunug waalan inta dayuurad lagu qaato la geysto meeshii carwo ee lagu soo bandhigi karo si loo ihaaneeyo taas Faragelin maaha miyaa?
Mustaf waxaan kula talineynaa in aanu nahay daciif waa dhab laakiin ma sii ahaan doonno dadka Somaliyeedna waa adkeyso badan yihiin balse ma illoobaan dabadhilif oo waxaa tusaale kuu ah meeshii uu ku dambeeyey kii ku fadhiyey kursiga aad hadda ku fadhido adiguna halkaas ka xun ayaad ku dambeyn doontaa haddii aadan badalin waddada aad hadda hayso.
Tanaxa taariikhda ee waliba reer tolkaa dib u eeg Mustafow, maaha rag aqbala dabadhilifnimada gumeysiga oo intaas oo wax garad sharaf leh ayaa ka soo baxday Sayida Maxamed iyo Dhoodaanba ha ugu horreeyeene, la yaabsa malaha haddii sakadii doqonimada ee reeka ku waajibtay aad adigu tahay maanta ee dib isu qabo. Itoobiya Somaliya ma farageliso oo kaliya ee way haysataa. Maxaad Faragelin u taqaan bal Somalida u sheeg.